Nahoana no esorina daholo ireo sarivongana dindon’ny fanjanahantany ao Amerika? · Global Voices teny Malagasy
Sarim-pandravàna ny famoretana, ny fanandevozana ary ny fanjanahana
Nandika (fr) i Chloé Bonvallet
Voadika ny 20 Febroary 2021 17:21 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, русский, Français, Ελληνικά, Português, Español
Ry zareo piurek mamaha ny sarivongan'i Sebastián de Belalcázar. Sary fanaingoana an'i Edgar Humberto Álvarez, nahazoana alàlana.
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana, mitondra mankany amina pejy amin'ny fiteny espaniôla ny rohy rehetra ato anatin'ity lahatsoratra ity.]
Ny Septambra 2020, nisy mpikambana avy amin'ny foko vazimba teratany Piurek, avy ao amin'ny fari-pitondran'i Cauca ao Kôlômbia [fr], namaha ny sarivongan'ilay espaniôla mpanjanatany, Sebastián de Belalcázar – nanorina ireo tanàna ao Cali sy Popayán. Teo an-tampon'ny piramida (rirakitso) Morro de Tulcán, ao amin'ny tanim-pàsana masina efa hatrany amin'ny vanimpotoana talohan'i Kôlômbia, no nisy ilay sarivongana. Araka ny fanambaràna ofisialy iray avy amin'ny Hetsik'ireo Manampahefana Indizeny ao Atsimo-Andrefana, taorian'ny sarintsarina fitsaràna iray no nandraisana ilay fanapahankevitra, nandritra izany i Belalcázar no nambara fa meloka amin'ireo heloka bevava sy fandripahana natao an'ireo vahoaka vazimba teratany, ary hatramin'ny fibodoana sy fakàna ny tanin'izy ireo sy ny lovany.
Volana iray taorian'io, tao amin'ny lalamben'ny Fanavaozana ao Meksika, nesorin‘ireo manampahefana ao an-toerana ny sarivongana iray maneho an'i Christophe Colomb, mody nolazaina fa hoe noho ny asa fikolokoloana. Kanefa, ny zavamisy hoe andro roa monja nialoha ny fankalazàna ny nahatongavan'i Christophe Colomb tao Amerika no niseho izany, dia mahatonga antsika hino hoe ny tahotra hahita io sarivongana io hiharan'ny fanimbàna no antony nandraisana ilay fanapahankevitra. Indrindra rehefa fantatra fa volana vitsivitsy tany aloha, nisy antso nalefa tao amin'ny aterineto, ho an'ny governemantan'ny renivohitra meksikàna, mba hanesorana ireo sarivongana manome “voninahitra ny fanjanahantany“.
Andro roa taty aoriana, tamin'ity indray mitoraka ity tao La Paz (Bolivia), nisy andiana mpikatroka avy amin'ny fikambanana Mujeres Creando (Vehivavy Mamorona) naka toerana teo amin'ny Kianja Isabel de Castille, ary nanome anarana vaovao azy ho la Plaza de la Chola globalizada. Nandritra ilay hetsika, ny sarivongana naneho an'i Isabelle Ikala Katôlika, ilay mpanjakavavy namatsy vola ny dian'i Colomb tamin'ny 1942, dia notafiana pollera – zipo nentindrazana fitondran'ireo vehivavy vazimba teratany na “Cholas” ao amin'ny firenena – sy satroka iray mampiavaka ny bôliviàna ary aguayo iray – bodofotsy miloko, volonondry amin'ny fomba nentindrazana, nampiasaina hibabena ny zazakely ao an-damosina.
Plaza de la Chola globalizada. Pikantsary avy amin'ny lahatsary “Plaza Chola Globalizada” an'i Miguel Hilari tao amin'ny YouTube.
Mpikarakara tokantrano no niantombohan'ireo vehivavy telo mpitarika ny mpikatroka; amin'izao fotoana izao ny iray dia mianatra Sôsiôlojia, ny iray hafa amin'ny sampana Lalàna, ary ny fahatelo dia ny voalohany amin'ny mpitarika vazimba teratany nahazo diplaoma tamina sekoly fianarana momba ny hôtely ao La Paz”.
María Galindo, ilay vehivavy nanangana ny fikambanana, manamafy fa naharay kiana marobe izy noho io hetsika io. Toy ny fanimbazimbàna ilay tsangambato no fahitàn'ny maro ny fampitafiana ilay sarivongana tamina fitafy nentindrazana. Ho an'i Galindo, ireny kiana ireny dia taratry ny fanavakavahana misy ao anivony sy ataon'ny fiarahamonina bôliviàna amin'ireo vahoaka vazimba teratany.
Tao anaty antsafa iray nataony ho an'ny gazety El País, manazava ilay mpikatroka fa tanjon'ireo hetsika nataon-dry zareo ny hanasongadina ny fiantraikan'ny fanjanahantany sy ny hanoherana ireo idealin'ny hatsaràna sy ny toetra tsy manisy lanja ny vehivavy vazimba teratany.
“Fiheverana nentin'ny fanjanahantany espaniôla ny hoe mpanjakavavy ny vehivavy fotsy fihodirana, patirao sy mpifehy ny tontolo (…) lasitra ho an'ny vehivavy, ny hatsarana ary ny toetra, lohahevitra tena miavaka miresaka ny maha-vehivavy izay tena mbola manjaka ankehitriny any anatin'ireo vondrom-piarahamonina ao Amerika Latina”. Aminy, io hevitra io no nandraikitra ny fiheverana ireo vehivavy vazimba teratany ho “ratsy endrika, tsy misy ilàna azy, natao hanao ny asa mafy ary marefo tsy azo antoka”.
Any amin'ny faritra hafa eto an-tany, tsy zavatra vaovao velively [ang] ny fanimbàna sy famotehana sarivongana. Raha ny tao Amerika Latina, vitsy ny tranga voarakitra tany aloha tany, dia voamarika tato anatin'ny taona vitsy ny fitomboan'ny fikatrohana momba ireo sarivongana eny amin'ny toerana natao ho an'ny daholobe. Tamin'ny 2019, niara-dàlana tamin'ireo hetsipanoherana tao Santiago du Chili, nisy mpikambana avy amin'ny vondrom-piarahamonina mapuche – ilay vondrom-piarahamonina vazimba teratany betsaka indrindra ao Chili – nandaboka sarivongana marobe naneho ireo espaniôla mpanjanaka, toy ny an'i Pedro de Valdivia sy ny an'i Diego Portales. Talohan'izany, tamin'ny 2004, nopotehana ny sarivongan'i Colón en el Golfo Triste tao Caracas, ao Venezoelà, ary nosoloina tamina sarivongana maneho ireo olona vazimba teratany. Kanefa, niverina nampanontany tena ny momba ilay hetsika satria toa nanome vàhana ny tombontsoa pôlitika tamin'izany fotoana izany ary tsy eritreritra avy any amin'ireo vondrona vazimba teratany.
Sarivongan'i Juniper Serra nopotehana tao Los Angeles, Kalifôrnia. Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'i ABC7 tao amin'ny YouTube.
Tao Etazonia, firenena izay ahitàna matetika ny hetsika tahaka ireny, ireo sarivongana maneho ireo olona nanana fifandraisana tamin'ny fanjanahan'ny espaniôla no nesorina. Ny Jona 2020, tao Los Angeles, nisy andian'olona manohitra ny fanavakavahana, nahitàna ireo vazimba teratany manana fiaviana amerikàna latina, no nandaboka ny sarivongan'i Fray Junípero Serra – ilay nitarika voalohany ny fametrahana ny finoana kristiàna tao Kalifôrnia. Jessa Calderón, vazimba teratany, mpanakanto sady mpikatroka, dia nilaza fa: “holatra vao miandoha avy amin'ny fery nanjo ny vahoakanay fotsiny izao.” Notsipihany ihany koa ny zavamisy hoe ny fanerena ara-tantara ny resaka finoana dia tranga iray mifamatotra amin'ny “habibiana, herisetra ary ny famoretana”. Hamafisin'i Calderón fa, ho an'ireo vazimba teratany, “toy ny fanerena Jiosy iray handalo isanandro manoloana ny sarivongan'i Hitler” ny fandeferana ny fisian'ny karazana tsangambato tahaka ireny.
Tao anaty antsafa iray navoakan'ny gazety El País, milaza ireo profesora sy mpikatroka manampahaizana manokana momba io resaka io hoe “takatr'izy ireo ny hatezerana misy ao amin'ireo nanaisotra ireny sarivongana ireny, satria tsy nisokatra teo amin'ny sehatra demaokratika mihitsy ny adihevitra”. Roberto Ignacio Díaz, profesora mampianatra ny literatiora espaniôla ao amin'ny Oniversite atsimon'i Kalifôrnia, mihevitra “[fa] misy karazana hatezerana iraisana (…). Tsy ilay amin'ny lafiny ratsy. Fikomiana iray amin'ny lafiny miabo ary goavana”. Na niaiky aza ilay profesora fa azo heverina ho toy ny fanimbana zavatr'olona sy fandrobàna ny fanimbàna ireny sarivongana ireny, notsipihany ihany koa fa afaka ny ho lasa hetsika tsara ho tadidiana iny, manamarika ny tantara.
Mifanohitra amin'izay kosa, Sandra Borda, profesora mampianatra ny siansa pôlitika ao amin'ny oniversite-n'i Los Andes, misafidy ny tsy hamaritra an'ireny fihetsika ireny ho toy ny fanimbàna zavatr'olona, ary manosoka hevitra ny mba handalinana ireo antony sy ny hafatra mifamatotra aminy. Hazavain'i Díaz ihany koa fa ny fanesorana ireny sarivongana ireny dia “tsy famafàna ny tantara akory. Anaty boky no soratana ny tantara. Ny tsangambato kosa, amin'ny ankapobeny, dia ajoro ho entina manome voninahitra ireo tranga mampirehareha ny firenena iray, ary ireo tranga izay tiany hosaintsainina.”
Ho an'i Erika Pani, mpahay tantara ao amin'ny Colegio de México, “tsy maintsy averina dinihana mandrakariva ny tantara”, toy ny fomba atao “hampanarahana toetrandro ny fitsaboana”. Amin'io lafiny io, heverin'i Manisha Sinha, profesora mpampianatra Tantara ao amin'ny oniversite-n'i Connecticut, fa io fomba fikiràna io dia toy ny fiverenana mandanjalanja raha toa ireo sarivongana efa nisy hatramin'ny taompolo maro tany aloha, na taonjato mihitsy aza, ka mampita sary mifanaraka amin'ireo soatoavina demaokratika indraindrain'ireo firenena ahitàna azy ireny.
Etsy ankilany, i Yásnaya Aguilar Gil, vazimba teratany meksikàna sady mpikatroka, dia mifantoka amin'ny sary an'ohatra maneho ny fandravàna ireo sarivongana, izay “tsy voatery foana hifanandrify amina olona iray tena nisy, fa nampifanarahana amin'izay sarintsarinà vesatra asaina soloiny tena”, na izany amin'ny asa fananganana azy, na ny fandravàna azy. Katsahan'ireo olona namotika ireny sarivongana ireny ny hamotika ihany koa amin'ny endrika an'ohatra ireo hevitra famoretana, fanandevozana ary fanjanahana.
Raha hiverenana ny resaka fanesorana ny sarivongan'i Belalcázar, izy ity dia tafiditra tao anatin'ireo fanetsehana isankarazany nanerana ny tany kôlômbiàna, hanoherana ny herisetra sy ny fandrahonana ara-tantara natao an'ireo vahoaka vazimba teratany, nefa koa hanoherana ireo onjam-pamonoana [fr] nitranga tsy ela akory izao, nahazo ireo mpitarika an-dry zareo. Azo tsipihana ihany koa ny fahavononana hamerina manoratra ny tantara mba hialàna amin'ireo soritra navelan'ny fanjanahantany. Ary koa, takian'ireo Piurek aloha ny tsy hamerenana ny sarivongan'i Belalcázar – araka ny nanambaràn'ny ben'ny tanànan'i Popayán azy. Fanirian-dry zareo ihany koa ny hananganana tsangambato maneho endrika iray ahafahan'ny vahoaka “mahita indray ny fahamendrehany”. Farany, takian-dry zareo amin'ny fanjakàna kôlômbiàna “ny fanonerana ara-tantara an'ireny vanimpotoanan'ny fanavakavahana, famonoana vehivavy, koliloky ary famonoana ireo mpitarika hetsika sôsialy”.